( ၁ ) ရက် 3000 စုယုံနဲ့သူဌေးဖြစ်ပြီလား …
( ၁ ) ရက် 3000 စုယုံနဲ့သူဌေးဖြစ်ပြီလား … 1 ရက် 3000 စုယုံနဲ့သူဌေးဖြစ်ပြီလား .. ဟိုနေ့က စာလေးတစ်ပိုဒ်မြင်လိုက်ရတယ်…. တစ်ရက် ၁၀၀၀ စုရင် ၅ နှစ် ၁၈ သိန်း… တစ်ရက် ၃၀၀၀ စုရင် ၅ နှစ် ၅၄ သိန်း ဆိုပြီးတွက်ပြထားတာ…. တစ်ရက် သုံးထောင်စု…. နောက်၅နှစ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစနိုင်တယ်ဆိုပြီး တွက်ပြထားတယ် … ။ မှန်လားဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတွက်ကြည့်ပါ…. ၁။ ငွေ ကြေးပြောင်းလဲမှု ပထမဆုံး သိရမှာက သိန်း ၅၀ ဆိုတာ …. နောက် …
ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေလူသိများလာတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်အိမ်မက် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာဆိုရင် ဆိုင်းမိုင်အဖြစ်နဲ့လူသိများတာကြောင့် ဆိုင်းမိုင်လို့လည်း ချစ်စနိုးခေါ်ခြင်းခံရသူပါ။ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာသရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပရိသတ်ချစ်ခင်မှုများစွာရရှိထားသလို အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားပါသေးတယ်။ ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ You Are My Life ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုမြောက်များစွာရရှိထားသူပါ။အခုဆိုရင် မအားလပ်နိုင်အောင် သီချင်းတွေလှည့်လည်ဖျော်ဖြေနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲလေးတစ်ပွဲမှာ surprise အနေနဲ့သွားရောက်ဖျော်ဖြေရင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို သူ့အလှည့်မှာလည်း surprise လုပ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကို “ဒီနေ့လေးက အရမ်းမင်္ဂလာရှိတဲ့ နေ့လေးပါ။ကြို့ပင်ကောက် က မင်္ဂလာစုံတွဲလေးကို ကိုယ်တိုင် surprise လုပ်ပြီး မင်္ဂလာသီချင်းလေးတွေ သွားဆိုပေးဖြစ်ခဲ့တယ်လေ မင်္ဂလာစုံတွဲလေးတော့မသိ ကိုယ်ကတော့ အပျော်တွေကူးစပ်ပြီး ရင်တွေတောင် ခုန်တယ် ကိုယ့်အလှည့်ကျရင်လဲ ဘော်ဒါတွေ ဝိုင်းပြီး …
“ဖေ့ဘွတ်မှာ အသိအမှတ်ပြု Blue Mark လေးရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ထွန်းထွန်း”
ထွန်းထွန်းကတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ရုံသာမက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး (၂၀၁၆)ခုနှစ်မှာတော့ “အုတ်ကြားမြက်ပေါက်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင် အကယ်ဒမီဆုကြီးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းကတော့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပျော်ပျော်နေတတ်သလို နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲမှာ လူရွှင်တော်အနေနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင် ဖန်တီးပေးနေတာဖြစ်ပြီး စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ထွန်းထွန်းဟာဆိုရင် လတ်တလောမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘွတ် အကောင့်လေးမှာ အသိအမှတ်ပြု Blue Mark လေးရရှိသွားခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဖေ့ဘွတ်အကောင့် Blue Markလေးရရှိသွားတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သူ့ရဲ့ My Day လေးကနေ ပရိသတ်တွေကို …
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အင်းကုန်းရွာ လမ်းထိပ်တွင် မြန်မာဘီယာ တင်ဆောင်လာသော ကားတစ်စီးတိမ်းမှောက်
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အင်းကုန်းရွာ လမ်းထိပ်တွင် မြန်မာဘီယာ တင်ဆောင်လာသော ကားတစ်စီးတိမ်းမှောက် ဒါမှ တို့ ရွှေဆည်သားကွ…😍👍👍👍👍👍 ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အင်းကုန်းရွာ လမ်းထိပ်တွင် မြန်မာဘီယာ တင်ဆောင်လာသော ကားတစ်စီးမှောက်… လူ အသေအပျောက်မရှိ….ဒေသခံပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီး ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းပေး…ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာပါ။ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အင်းကုန်းရွာ လမ်းထိပ်တွင် မြန်မာဘီယာ တင်ဆောင်လာသော ကားတစ်စီးမှောက်… လူ အသေအပျောက်မရှိ….ဒေသခံပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီး ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းပေး…ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာပါ။ photo credit copy,CRD-Chit ko ko UNICODE ကြောကျဆညျမွို့နယျ အငျးကုနျးရှာ လမျးထိပျတှငျ မွနျမာဘီယာ တငျဆောငျလာသော ကားတဈစီးတိမျးမှောကျ ဒါမှ တို့ ရှဆေညျသားကှ…😍👍👍👍👍👍 ကြောကျဆညျမွို့နယျ အငျးကုနျးရှာ …
ကွယ်လွန် ပြီးတဲ့နောက် ဝိညာဉ် ဘဝ နဲ့ အိမ် မှာ ၇ ရက်နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ် ၊ မဟုတ်
ကွယ်လွန် ပြီးတဲ့နောက် ဝိညာဉ် ဘဝ နဲ့ အိမ် မှာ ၇ ရက်နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ် ၊ မဟုတ် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အတော်များများပင် ဘဝ ဟောင်းမှ ဘဝ သစ်သို့ ပြောင်းကြရာ၌ သေလျှင်သေခြင်း မိမိ တို့ အိမ်မှ ထွက်မသွားပဲ ကွန်လွန် သူ တိုင်း ၇-ရက်လည်အောင် စောင့်နေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ် …။ ထို့ပြင် ရက်လည် သပိတ်သွတ် မှ သာဓု ခေါ်ကာ ရောက်ရမည့်ဘဝကို ပြောင်းသွားသည်ဟု အတွေးတိမ်စွာဖြင့်လည်း အထင်လွဲနေကြပါတယ် …။ အမှန်အားဖြင့် ထိုသို့ ထင်မြင်ယူဆနေခြင်းမှာ လွဲမှားနေပါတယ် …။ ထိုကိစ္စရှင်းလင်းရလျှင် ပဋိသန္ဓေ …
သင်မသိသေးတဲ့ ဘီယာရဲ့ အထွေထွေအသုံးဝင်ပုံများ….
သင်မသိသေးတဲ့ ဘီယာရဲ့ အထွေထွေအသုံးဝင်ပုံများ…. (၁) ဆံပင်ကိုအရှည်မြန်စေတယ် ဘီယာမှာ ဗီတာမင် ဘီနဲ့ ဆီလီကွန်ပါဝင်တာကြောင့် ဆံသားကိုအားပြည့်စေပြီး ဆံသားလှပကျန်းမာစေပါတယ်။ ဆံပင်ပေါ်သို့ ဘီယာတစ်ခွက်ကိုလောင်းပြီး ဦးရေပြားကိုနှိပ်နယ်ပေးပါ။၅မိနစ်ခန့်ကြာမှခေါ်င်းပြန်လျှော်ပေးပါ။ဆံသားများတောက်ပတာကို တွေ့မြင်ရပါမယ် …။ (၂) အသားအရေတင်းရင်းစေတယ် ဘီယာမှာ အသားအရေနုပျိူစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်ရှိတာမို့အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ထို့ပြင် အရေပြားဆဲလ်တွေကိုအားကောင်းစေပြီး အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းမှလဲ ကာကွယ်ပေးပါသေးတယ်။ ဘီယာ ထမင်းစားဇွန်း၁ဇွန်းကို ကြက်ဥအကာ နဲ့ သံလွင်ဆီ ၃စက်ခန့်ရောပါ။ထို့နောက် မျက်နာကို လိမ်းပေးပြီး ၁၀မိနစ်ထားပါ …။ (၃) အိပ်ပျော်စေတယ် ဘီယာမှာပါဝင်သော hop flower ကို ညအိပ်မပျော်သော ရောဂါများတွင် သဘာဝ အိပ်ပျော်ဆေးအဖြစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါတယ်။ သင့် ခေါင်းအုံးတွေကို ဘီယာ နဲ့ …
သိပ္ပံနည်းအရ လေ့လာတွေရှိထားတဲ့ တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး(၉)ချက်
သိပ္ပံနည်းအရ လေ့လာတွေရှိထားတဲ့ တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး(၉)ချက် လူတော်တော်များများက တရားထိုင်ခြင်းကနေ ရရှိစေမယ့် ကောင်းကျိုးတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတာကြောင့် ခုနောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာနှင့်တဝှမ်း တရားထိုင်ခြင်းကို လူကြိုက်များလာပါတယ်။ တရားထိုင်တယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိင်ဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ အတွေးစိတ်ကူးတွေကို တည်ငြိမ်လာစေအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်အောင် အကူအညီပေးနိုင်တဲ့အရာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ် …။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ စိတ်ရဲ့တင်းကျပ်မှုတွေ ဖိစီးမှုတွေကို လျော့နည်းစေပြီး အာရုံစုးစိုက်မှုကိုကောင်းစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်……… (၁) စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ကျစေတယ် တရားထိုင်ခြင်းကို လူတော်တေ်ာများများကြိုက်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ကျ စေတာကြောင့်ပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူ ၃,၅၀၀ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး လေ့လာတဲ့အခါ …
ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ကျပ်တစ်ထောင်တန် ငွေစက္ကူများ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှသာ ပြည်သူများ ငွေကြေးလဲလှယ်ခွင့်ရမည်
ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ကျပ်တစ်ထောင်တန် ငွေစက္ကူများ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှသာ ပြည်သူများ ငွေကြေးလဲလှယ်ခွင့်ရမည်”.. ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ကျပ်တစ်ထောင်တန် ငွေစက္ကူများကို လွတ်လပ်ရေးနေ့ စတင်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်သော်လည်း ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှသာ ပြည်သူများ ငွေကြေးလဲလှယ်ခွင့်ရမည် … ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါ ကျပ်တစ်ထောင်တန် ငွေစက္ကူကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ စတင်ထုတ်ဝေမည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က ကြေညာထားသော်လည်း ယင်းနေ့တွင် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်သေည့်အတွက် ငွေကြေးလဲလှယ်ခွင့် ရမည်မဟုတ်သေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည် …. ။ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်သည် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဖြစ်ပြီး ၅ ရက်နှင့် ၆ ရက်သည်လည်း …
This Year : 100608
Total Users : 395741
Total views : 1426938